एमाले नेतृत्वमा पूर्व माओवादीको ‘उत्साहपूर्ण’ सहभागिताबाट ओलीले दिन खोजेको तीन सन्देश !
November 30, 2021 N88LeaveaComment on एमाले नेतृत्वमा पूर्व माओवादीको ‘उत्साहपूर्ण’ सहभागिताबाट ओलीले दिन खोजेको तीन सन्देश !
चितवन । नेकपा एमालेको दशौं महाधिवेशनले केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षमा १९ पदाधिकारी चयन गर्दा पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका तीन जना समेटिए । रामबहादुर थापा बादल उपाध्यक्ष बन्दा लेखराज भट्ट र टोपबहादुर रायमाझी सचिव भए । उनीहरु सबै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सहमतिका लागि घोषणा सूचीमा परेको, तर चुनाव लडेर आएका हुन् । ६ उपाध्यक्षका लागि सात जना […]
November 30, 2021 N88LeaveaComment on विश्वप्रकाशलाई देउवाको जवाफ : बुढापाकालाई अर्ति दिने होइन, लिने गर्नुस्
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माबीच सार्वजनिक मञ्चमै जुहारी चलेको छ । मंगलबार सुवर्ण समशेर पुस्तक विमोचन एवं नवनिर्वाचित जिल्ला सभापति तथा क्षेत्रीय सभापति सम्मान कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति देउवा र प्रवक्ता शर्मासँगै उपस्थित भएका थिए । कार्यक्रममा प्रवक्ता शर्माले आफूले अघि सार्दै आएको राजनीतिक प्रस्तावको चर्चा गरे । […]
एमाले सचिवमा गोकर्ण विष्टले पाए सर्वाधिक मत, भीम आचार्य र टंक कार्की पराजित
November 30, 2021 N88LeaveaComment on एमाले सचिवमा गोकर्ण विष्टले पाए सर्वाधिक मत, भीम आचार्य र टंक कार्की पराजित
चितवन । नेकपा एमालेको सात सचिव निर्वाचित भएका छन् । सौराहमा भर्खर सकिएको मत गणनाअनुसार गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, छविलाल विश्वकर्मा, पद्मा अर्याल, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी र रघुवीर महासेठ निर्वाचित भएका हुन् । गोकर्णले १९७६ मत पाएका छन् । सचिवका उम्मेदवारले पाएको यो सर्बाधिक मत हो । योगेशले १९६४, छविलाल र प्दमाले समान ८०० […]
November 30, 2021 N88LeaveaComment on उपाध्यक्ष जित्नेमा अष्टलक्ष्मीको सबैभन्दा बढी मत, बादलको सबैभन्दा कम, कसकाे कति मत ?
चितवन । नेकपा एमालेको चितवनमा जारी १०औं महाधिवेशनमा नयाँ नेतृत्व चयनका लागि भएको भएको निर्वाचनको मतगणना भइरहेको छ। पदाधिकारीमध्ये उपाध्यक्ष पदमा अष्टलक्ष्मी शाक्यले सर्वाधिक मत पाएर विजयी नजिक छन्। उनले हालसम्म १९७६ मत पाएकी छन्। यस्तै दोस्रोमा सुरेन्द्र पाण्डेले १९२५ सुवास नेम्बाङले १८६५, विष्णु पौडेलले १८५६, युवराज ज्ञवालीले १८४२, रामबहादुर थापा बादलले १७६८ मत पाएका […]
ओलीका लागि दिलोज्यान दिने यी तीन पात्र, जो केन्द्रीय कमिटीमै अटाएनन्
November 30, 2021 N88LeaveaComment on ओलीका लागि दिलोज्यान दिने यी तीन पात्र, जो केन्द्रीय कमिटीमै अटाएनन्
काठमाडौं । नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका लागि मरिमेट्ने तीन जना नेताहरु केन्द्रीय कमिटीको प्रस्तावित सूचीमा छुटेका छन्। नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतकसमेत रहेका विशाल भट्टराई, राष्ट्रिय युवा संघका पूर्वअध्यक्ष रमेश पौडेल र अनेरास्ववियुका पूर्वअध्यक्ष ऐन महर केन्द्रीय सदस्यमा अटाएका छैनन्। सचेतक भट्टराई नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य हुन्। माओवादी केन्द्र र […]
November 30, 2021 N88LeaveaComment on एमाले अध्यक्षमा ओली विजयी, भीम रावलले कति मत पाए ?
काठमाडौं । नेकपा एमालेको १०औँ महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएका छन् । प्रतिस्पर्धी उपाध्यक्ष भीम रावललाई फराकिलो अन्तरले हराउँदै ओली दोस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष भएका हुन् । ओलीको पक्षमा ९० प्रतिशतभन्दा धेरै मत खसेको छ। तर निर्वाचन आयोगले घोषणा गर्न बाँकी छ। ओलीले खसेको २ हजार ९६ मतमध्ये ९० प्रतिशत […]
चितवन । नेकपा एमालेको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि भएको निर्वाचनको मतगणना जारी छ । मत गणनामा अध्यक्षका उम्मेदवार केपी शर्मा ओलीले सुरुदेखि ठूलो मतान्तरसहित नै अग्रता लिएका छन् । निर्वाचन समितिले दिएको पछिल्लो जानकारीअनुसार ओलीले ९९६ मत पाउँदा अर्का प्रत्यासी भीम रावलले १११ मत पाएका छन् । चितवनमा आयोजित १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सर्वसम्मत नेतृत्व […]
November 30, 2021 N88LeaveaComment on अमेरिकामा बाटो काट्ने क्रममा गाडीले ठक्कर दिंदा नेपाली महिलाको मृ’त्यु
अमेरिकाको मेरिल्याण्डस्थित प्रिन्स जर्जस् काउन्टिमा सडक पार गर्ने क्रममा गाडीले ठ’क्कर दिँदा एक नेपाली महिलाको ज्या’न गएको छ । स्थानीय प्रहरीकाअनुसार सोमबार राति ७ बजे ४० वर्षीया वर्षा खड्का प्रसाईंलाई गाडीले ठक्क’र दिएर भागेको थियो । उनी ल्याण्डओभरमा बस्दै आएकी थिइन् । उनलाई नजिकैको अस्पतालमा पुर्‍याइए पनि उनको ज्यान बचाउन नसकिएको प्रहारीले बताएको छ । […]
फुटबलर विमल घर्तीमगर यी युवतीको प्रेममा रहेको खुलासा
November 30, 2021 N88LeaveaComment on फुटबलर विमल घर्तीमगर यी युवतीको प्रेममा रहेको खुलासा
काठमाडाैं । नेपालका चर्चित फुटबलर विमल घर्तीमगरको प्रेमसम्बन्धको पछिल्लो समय निकै चर्चा छ । हालै उनले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो प्रेमसम्बन्ध रहेको संकेत गरेका छन् । उनले फेसबुकमा एक तस्बिर शेयर गर्दै लीना प्रधानलाई मेन्सन गर्दै ‘मिस यू’ लेखेका छन् । उक्त पोष्टमा धेरैले बधाई पनि दिएका छन् । साथै विक्रम लिम्बुले पनि प्रेम सफल […]
November 30, 2021 N88LeaveaComment on नेपाली कांग्रेसको ५७ जिल्लामा सभापति चुनिए, कुन जिल्लामा कुन पक्षका ? सूचीसहित
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनअन्तर्गत सोमबारसम्म ५७ जिल्लामा अधिवेशन सम्पन्न भएको छ । अधिवेशन सम्पन्न भएका जिल्लामा वडा, स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशन भई जिल्ला कार्यसमिति चयन भएको हो । प्रदेश दुईका आठ जिल्लासहित २० जिल्लामा भने अधिवेशन हुन बाँकी छ । कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिका अनुसार मंसिर १६ र […]